XOG WARAN: Khaliijka oo gilgiley nidaamka Feederaalka Soomaaliya. – Xeernews24
XOG WARAN: Khaliijka oo gilgiley nidaamka Feederaalka Soomaaliya.
Murankii ka dhashay moowqifka dowladda feederaalka Soomaaliya ay ka qaadatay khilaafka dowladaha khaliijka iyo kan ay ka qaateen dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeraya, markastana waxaa kasoo kordhaya wax cusub oo arrimaha sii murginaya.
Markii hore arrinta waxa ay ku ekeyd kala aragti duwanaan oo kaliya, balse hadda waxa ay u egtahay in uu u talaabay khilaaf rasmi ah oo ragaadinaya laamaha dowladeed ee Soomaaliya oo markii hore ku jiray xaalad dib usoo kabasho.
Inkasta oo laga yaabo in markii horeba xidhiidhka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar uu ahaa mid ul booc ah ku kutubayay, haddana murankan ka dhashay arrimaha khaliijka ayaa u muuqda in uu wax wayn u dhibayo rajo kasta oo laga qabay in xaaladda soo hagaagto.
Madaxweyne Axmed Ducaale Gelle, Xaaf, ayaa taageeray go’aanka xulufadaha Sucuudiga, halka madaxweyne ku xigeenka Maxamed Xaashi Cabdi “Carabeey” iyo goddoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir ay taageereen go’aanka dowladda feederaalka iyaga oo cuskaday qodobka 54-aad ee dowladda dhexe siinaya awoodda ay go’aan uga gaadhi lahayd siyaasadda arrimaha dibadda.
Hase yeeshee waxa ay xaaladda cirka isku sii shareertay kadib markii madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu sheegay in dowladda feederaalka ay diyaaradii uu la socday “ku xayirtay magaalada Hargaysa”.
Xaaf ayaa dowladda feederaalka ku eedeeyay in ay faragalin qaawan ku hayso maamulka Galmudug, wuxuuna yidhi “Waxaan reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo dowladaha caalamka iyo UN-ka ogeysiinayaa arrinta faragelinta ah ee dowladda feederaalka nagu hayso in ay tahay dhabar jab reer Galmudug ka dhan ah”.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/xog-muhiim-ah.jpg 201 251 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-09-26 23:34:382017-09-26 23:34:38XOG WARAN: Khaliijka oo gilgiley nidaamka Feederaalka Soomaaliya.
SAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo Si Maqaam Hoose ah loogu soo dhaweeyay Dalka... jabuuti oo sheegtay inay ka xunyihiin dhibaatada lagu hayo Muslimiinta Rohi...